Very finoana, reraky ny fiainana
Date: 06 janvier 2016 - 16:16
vehivavy no manoratra, 35 aho ary titre fotsiny amiko ny antsoina hoe "kristianina" satria dia very finoana aho.
15 taona lasa izay no nitaizan'ny aretina ahy, tsy cancer akory (na dia manakaikikaiky aza fa tsy mahafaty) fa aretina tena tsy afaka amiko ary kilema mavesatra eto amin'ny fiainako (miala tsiny fa betsaka ny mahafantatra io aretiko oi ka tsy ho lazaiko hoe inona sao misy mahalala aho eto am forum), nandritra ny 5 taona voalohany naharariako teny ankatso dia toy ny "sujet de moquerie " n'ny ankizy teny am université aho, ary tena nisy fiantraikany tamin'ny fianarako izany fa dia tsy vita ny fianarako teny fa nandeha cntemad aho ary nety tamiko ilay izy satria lasa nihafy tsy nifandray taman'olona aho noho io aretiko io, vita ihany ny fianarako tao anatin'ny fihafiana sy tsy fifandraisana taman'olona.
Ny raiko moa efa maty efa ela ary ny reniko no niahy ahy sy nanampy fatratra ahy aha tafita ahy amin'ny fianaran, noho izany dia nanenjika ahy ny eritreritro raha tsy omeko voninahitra izy ireo ka dia tsy maintsy nitady asa aho, ary nahita satria afenina ilay aretina na dia misy maha remarque ihany aza indraindray dia hodiana fanina fotsiny na dia maharary aza. (tena lava be raha ho tantaraiko amin'ny antsipirihany)
Hisaorako an Andriamanitra ve fa nahita vady sahaza aho? sady niteraka? anefa anatin'ny tahotra sao mifindra amin'ireto zanako ny aretioko, na ireo zanako aza tsy mahalala io aretiko io sao dia hitabataba imason'olona amin'ny maha zaza azy, ka dia mitohy ny fihafiako na anaty tokantrano tokony ho sambatra aza.
fintiniko ilay izy.
Marina fa samy manana ny hazo fijaliany, ary miezaka miarina mba tsy ho tara, fa ny fanontaniako dia ireto:
- nivavaka foana aho taloha, na ny any ampiangonana aza mijerijery sy mitsetra ary mitsara toy ireny nisy namosavy ireny ny tena, fa tsy nahomby ilay izy na dia natao tamin'ny fo, fa dia nahoana no tsy maintsy nasiana io epreuve io teo amin'ny fiainako?
- marina fa mety ho maro ny mbola mizaka fijaliana mbola mafy nohon'ny ahy, fa nahoana anefa no tsy maintsy hatao izany ilay fiainana miaraka amin'ny Tompo?
- ahoana ny fomba hiverenako hino indray hoe tia ahy Aandriamanitra? hoe satria nomeny zanaka tiana ve aho? tena faly aho mananjanaka anefa matahotra sao hiaina izao iainako izao ireto zanakao any aoriana any ka tsy ho zakako na ny mieritreritra izany akory aza...
- efa voasoratra ve hoe hizaka io aretina io aho? izay tokoa ve no hitan' Andriamanitra hoe mahatsara ahy? anaty plan ny ve ny hanasitrana ahy?
- mety nisy zavatra tsy nety ve nataoko dia famaizana ahy ilay izy?
Izaho dia mino tokoa fa misy Andriamanitra, fa mahatsapa aho fa tsy hitany, ataoko hoe efa nanaiky io aretiko io aho anefa matahotra ny hifindrany amin'ireto zanako...
malaheo ity vadiko aho izay olon'ny fiangonana tokoa, ary miady lava izahay rehefa ilazany aho hoe andao handeha hivavaka, satria 10 taona lasa izay tsy nivavaka intsony aho raha tsy hoe mariazi'olona na hoe fety kristianina mba hoentiko hampifaliana ny vadiko fotsiny fa tsy amin'ny foko, fa na ny fanamasinana ny mariazinay aza dia nataoko ho toy ny formalité fa tsy nandray ampo aho...
ka dia miangavy anareo aho, tiako ny hiverina hino ny fitiavan'Andriamanitra, tiako tezaina anatin'ny finoana ny zanako ahalalany fa misy foana ny ambony na dia mafy aza ny fiainana, fa ho zavapoana ihany izany raha ny tenako izay manabe azy ireo dia tsy voasarika amin'ny fivavahana intsony fa diso fanantenana.
Date: 06 janvier 2016 - 16:28
Tsy dia mahay handresy lahatra anao aho fa zao fotsiny no lazaiko aminao. Tano mafy ny finoanao an'Andriamanitra ary matokia azy fa ataony tanteraka. Aza mitsahatra mivavaka izany.
Ezaho aloha ny mamaky ny bokin'i Joba
Miezaha mihaino hira ara-pilazantsara ireny na dia ny hampifalifaliana tena fotsiny aza; Oh "Tsara ianao" an'i Fara Andriamamonjy angamba izy izay.
Dia mirary soa ho anao kazanov
Date: 06 janvier 2016 - 17:11
fanina> mivavaha mandrakariva, ary matoa enao nizara io olana anao io d mbola manana finoana enao. tsy mora ny manaradia an Tompo ary mahagaga fa ny olona mivavaka foana no iharan'ny fitsapana fa ny ol tsy mivavaka vel be otran tsy mba manana problème, ka d courage "miorena tsara, aza miova, ary mahefà be mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny Tompo"
Date: 06 janvier 2016 - 17:28
Nahoana ianao no kivy ? Mety mbola tsy ampy tsara angamba ny fahafantaranao izany hoe tena Kristiana manaraka ny Tompo izany. Ny vavaka anie tsy any am-piangonana ihany fa iainana isan'andro na maraina na atoandro na hariva e .
Mety mbola tsy ampy na tsy marim-pototra tsara ny finoanao.
Marina mihitsy io tenin'ny namana eo ambony eo io hoe vakio tsara ny tantaran'i Joba ao amin'ny Baiboly dia ho voavaly ny fanontanianao.
Date: 06 janvier 2016 - 18:02
Mety mba hanome hery kely anao koa ny tantarako.
Raha ny aretina mafy nahazo ahy dia tsy ho voatanisa eto , fa ny farany no holazaiko... na dia nivavaka mafy aza aho t@ fikarohana ny aretina sns... dia nivaly fa voan'ny CANCER ny tenako, za mananjanaka roa.
izaho anefa sady tsy mpisotro taoka ary tsy mifoka sigara fa sportif.
Marina fa manozongozona finoana mihitsy indraindray ny zavamitranga, fa notazoniko ny finoko na dia somary nahitsiko kely ihany aza ny fomba fijery sasany,( tsy hoe natao harahina akory fa mba tantaraiko fotsiny satria nampilamina ny saiko).
Jereo fa misy zazakely matin'aretina ... misy zaza 2 taona izay matin' ny cancer tena nandratra ny foko ny tantarany...
Amiko izany dia asoriko ao antsaina izany hoe famaizana izany , na koa hoe fitsapàna, inona no hamaizana ireny zaza ireny?
Be dia be ny zavatra ijaliantsika olombelona, amiko dia tsy hoe ho an'izay manaraka ny tompo io na tsia... anaty plan an ' Andriamanitra ve ny aretiko sa tsia? avelako ho misitery toy ny misitery rehetra fotsiny io,
Be dia be anie ny zavatra tsy natao ho haintsika eh, ary tsy alefa be any ny saina , amin izay fomba fijery izay dia tsy afaka hanome tsiny an Andriamanitra amin ny zavatra tsy fantatraO ianao.
Tandremako ihany koa ireo mampanatena "izay angatahanao ho azonao raha mivavaka" , mampanantena miracle... ny antony dia tsotra , efa natao ho faty aho na misy cancer na tsia, fa raha hisy tokoa ny miracle ataon Andriamanitra amiko dia ho avy izany, raha tsy misy moa , dia io efa nahitsiko io ny fijeriko ""tsy natao hotakatry ny saiko ny fiasa , na ny fandaharan Andriamanitra"" tsy hoe raha mivavaka be aho dia ho salama foana, na ho antitra be vao ho faty...eto aloha dia somary tsy manaraka lotra ireny mpahay ny baiboly mampanantena na koa , mandatsa sy mampihorohoro ireny ny tenako...
Ny ahy dia tsy ampiko vesatra mihitsy ny fiainako , tsy heveriko ho heloka mihitsy izany tsy mankany ampiangonana izany.
Ilay "Bon dieu", nahary izao rehetra izao no inoako fa tsy sanatria "Dieu" tsy mifaditrovana manao helo araky ny fijery sasany.
Ny important amiko dia manararaotra mifaly @ny andro izay omen Andriamanitra ahy , miaina tsotra , miezaka manao ny marina , ary tsy ny halavan ny andro iainako lotra intsony no ataoko important fa ny "qualité de vie " @ izay andro sisa eo.
Mahereza ary ataovy izay mahafaly ao antokatrano fa mandalo daholo isika no eto
Date: 06 janvier 2016 - 18:55
Mankahery>>>mahafinaritra be ilay fisainanao. Manana namana voany cancer aho fa dommage tsy mihiditra @ "forum moov" itony izy.
Fanina>>aza manary ny fivavahana fa tohizo foana dia positiveo ny fiainana.
Date: 06 janvier 2016 - 21:23
ie, tena marina fa samy mizaka hazo fijaliana isika olombelona tsi-11 na ireo tsy miteny aza !!!
- ao no azon'ny pb tsy mety misy solution toy ny aretina ka entina mandra maty
- ao no azon'ny pb dia rhf resolu dia tonga indray ny pb manaraka !!!
>> fa ny tena tsy tanty dia ny pb iray efa eo mila tsy ho zaka dia miampy hafa indray !!!!!
PS : ny pb ve avy am Atra sa avy am devoly ??????
Date: 06 janvier 2016 - 21:34
Atra tsy manome pb fa i satana no manome pb ho an'i olombelona.
Date: 07 janvier 2016 - 08:37
fanina : Manamafy ny voalazan'ny namana ery ambony fa tsy Andriamanitra no fototry ny fahoriantsika fa i Satana. Ary izy ilay atao hoe andrianan'izao tontolo izao. Tsy hahita fiadanana ara-nofo eto isika.
Ampantsiahiviko fohy ny tantaran'ireo jiolahy teo amin'ny hazo fijaliana.
Ny voalohany dia ilay niteny hoe : Raha tena Zanak'Andriamanitra Hianao (mantsy an'i Jesosy) dia vonjeo isika. Famonjena vetivety nefa io. Mety ho sitrana vetivety ianao nefa ny fanahinao ho very. Mampalahelo moa fa misy aza ireo fiangonana zandriny sasany izay mampanantena io fahagagana famonjena vetivety io.
Ny faharoa dia ilay niteny hoe : Tsarovy aho rehefa any amin'ny fanjakanao ianao. Io kosa dia maneho antsika Kristiana izay miandrandra ilay Fanjakan'i Kristy izay tsy misy aretina sy fanaintainana intsony.
Koa io faharoa io no toerana tokony hisy antsika Ranabavy.
Ny torohevitra amim-panetren-tena omeko anao dia voalohany tohizo ny vavakao sy ny famakiana ny Soratra Masina. Mangataha amin'ny Tompo mba hampitombo ny finoanao ary mandehana mankany am-piangonana miaraka amin'ny vadinao satria sady hahafaly azy izany no hahafaly ny Tompo.
Koa dia mahereza Ranabavy ary samia mivavaka tsy mitsahatra
Par: miss tery
Date: 07 janvier 2016 - 09:38
Andriamanitra dia fitiavana ary tsy mivadika izy fa fitiavana mandrakariva. Amin'ny maha-Andriamanitra azy dia tsy ho takatsika ny fiheverany sy ny fandaharany nefa matokia fa misy antony ny zavatra rehetra ary fantany izay mahasoa. I Jesoa aza tsy nanam-pahotana nefa toy inona ny fijaliana nentiny, izay tiany no ampitoviany anjara Aminy. Mahereza fa misy hasiny ny fijaliana entina miaraka Aminy
Date: 07 janvier 2016 - 10:05
ary ahoana ary ilay teny ao am bible oe :
- mankanesa aty Amiko ianareo zay miasa fatratra sy mavesatr'entana fa Izaho no hanome anareo fitsaharana
- tena misy mahazo fitsaharana tokoa v ny olona eto antany ????
>> nefa mbola maro am tsika no mizaka isanandro hazo fijaliana izao an !!!
Date: 07 janvier 2016 - 10:24
misaotra anareo rehetra namaly, betsaka ny azo raisina fa mankasitraka.
Mankahery > tena mankahery anao hatrany fa mahatehidera ny fisainanao, enganie ka na sanatria hiafara amin'ny fisarahana na fahafatesana aza ny tantaranao dia hoe feno fifaliana anie izany...
Hiezaka aho hiverina amin'ny lalan'ny Tompo, hiezaka aho hanome ireto zanako ny fanabeazana atolony satria na dia betsaka aza ny fanontaniana tsy hay valiana dia ny fanabeazana manaraka ny sitrampon'Andriamanitra dia tsara foana
Date: 07 janvier 2016 - 10:47
ho an'i fanina:
amimpanetrentena no mba itondrako anao ny hevitro amin'ny maha-Kristiana ahy:
-hoy ny soratra masina hoe : "Mivavaha ary aza mitsahatra",ny antony nahatongavan'ny Jesoa teto ambonin'ny tany dia hamonjy ny zanak'olombelona,tamin'ny teto antany izi dia nampiseho fa afaka nampahiratra ny jamba,nanasitrana ny olona paralysé,ny olona mandringa,ary nanangana ny olona efa maty, nampijanona ny tafiodrivotra ,ny hevitrizany amiko dia tsy ilaozana fahoriana eto antany saingy Jesoa dia nampiseho fa afaka nanala ireo fahoriana ireo ,tokony hangataka aminy foana isika ary hatoky azy,hoy Izy :" magataha dia omena ianareo,Mivavaha ka aza mitsahatra,eto amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matokia izaho efa naharesy izao tontolo izao,indro izaho momba anareo mandrakariva ambarapahatongany fahataperan'izao tontolo izao."teny ao amin'ny baiboly daholo ireo.
Jesoa tompo sy mpamonjy ary mpampianatra antsika dia maty nijalijaly teo ambony hazo fijaliana,hoy izy :"Aza matahotra minoa fotsiny ihany,minoa an'Andrimanitra ary minoa Ahy koa"
Date: 07 janvier 2016 - 11:44
Ny Tompo mamaly vavaka foana: mety eo no ho eo , mety aoriana kely, nefa mety koa tsy ny fangatahanao no hamaliany anao, fa any @ fantany fa mahasoa anao. Fa Atra manana izay heverany antsika, dia hevitra mitondra soa fa tsy loza.
Ny ataonao dia mametraka ny aretina eo Aminy.Aza manaiky, Izy efa niteny hoe "ento aty amiko ny enta-mavesatra fa zaho hanome anareo fitsaharana". Ary mahatokia koa an, fa aza miroro saina mametraka fanontaniana sy miahiahy foana.
Dia tsarovy koa fa tokony hikatsaka ny Fanjakany aloha, dia hanampy ho anao ny zava-drehetra: manaova ny marina,manaova ny sitrapony izay tsara tokoa. Aza dia ny aretinao no atao mibahana ny fiainanao fa, maneho fitiavana @ manodidina, ny fianakaviana, tiava ny fahavalo, manaova asa soa, fenoy fifaliana ny fiainanao.
Fa mafy lavitra noho ny entinao io ny nentin'i Jesoa teo @ hazo fijaliana.
Date: 07 janvier 2016 - 12:39
aza avela hahalala ny anton'ny nanaovanao ny hatsiaka maman'ala aoka aho hatoky anao! Matoa mbola tsy vahan'Andriamanitra ny olanao dia mbola tsy sitrany ny manala azy, miandry ny sitrapony mba hanehoana ny voninahiny.Matoa ianao mbola matahotra dia mbola tsy ny tompo zay no mitondra ny fiainanao, ny tahotra dia avy amin'ny satana. Aza adino nefa fa tsy ianao irery no miady fa eo foana Andriamanitra.Filipianina 4:6. Mahareta amin'ny finoana fa ny alahelo mody fifaliana miaraka amin'ny Tompo
Date: 07 janvier 2016 - 13:45
za koa matetika dia tena manontany tena hoe henon'Andriamanitra v za mitalaho,
maninona no nasiana izao fiainana izao raha toa ka i satana no avela ampijaly.
fa maninona ny olona no avela hisafidy ny ratsy na ny tsara fa maninona raha tonga dia ampiainana ny fiainana mendrika.
fitalahoana nge re-olona no efa ataontsika zanak'olombelona @ vavaka zanyfa tena ny ratsy ihany no manjaka e!
fa maninona no tsy foanan'Andriamanitra ny fanjakan'ny devoly fa mbola avela ambabo olona ihany?
Date: 07 janvier 2016 - 14:29
fanina >>> sarotra ny miresaka eto @ny serasera fa mametra mail ianao raha azo atao
Par: tsy miafina
Date: 07 janvier 2016 - 15:40
Tsy eto ve no tokony hiresaka ry "ra2" mba ampahery ny rehetra? Tsy misy fivavahana afenina ra tsy hoe mivadika ... ???
Date: 07 janvier 2016 - 17:38
sodapop>>>ny kristiana amiko aloha dia mila mino oe misy ny fanjakan'ny lanitra sy ny helo.
tsy moramora ny miditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra hoy Jesoa ao @ Matio.
toy ny sedra atao ohatra oe mpianatra manao examen iany le izy,eritrereto nge oe ny ol reetr ts mila manala CEPE BEPC BAC zany fa tonga de atao lasa ingenieur na dokotera daholo e.mety mirodana daholo ny building sy menjerazera daholo ny roplanina.
toy ny fijalian'ny mpianatra manala examen de tsy maintsy mandalo sedra ny kristiana.hoy Jesoa ao am
-apok 2;10 :« Aza matahotra izay efa hiaretanao; indro, ny devoly hanao ny sasany aminareo an-tranomaizina, mba ho voazaha toetra ianareo, ary hanam-pahoriana hafoloana. Aoka hatoky hatramin'ny fahafatesana ianao, dia homeko anao ny satro-boninahitra fiainana. »
-asa 14;22 :« tsy maintsy ho amin'ny fahoriana be no idirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra. »
-lio 18;1:« Ary Jesosy nanao fanoharana taminy, fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka, » (Lioka 18:1)
Date: 07 janvier 2016 - 18:05
tsy miafina >>>> marina izany fa tsy tia hanangana polémique ny tena.Nefa dia ho halefako ihany ilay rohy sao dia mety hanampy ilay namorona ny sujet
w w w.youtube.com/watch?v=Zof-JwPPc9E
Date: 08 janvier 2016 - 16:04
fanina > Andriamanitra dia mamaly vavaka tokoa, ny atao hoe mamaly vavaka tsy voatery eny hatrany @ fangatahantsika fa mety ho TSIA koa satria zay no fantany fa mahasoa antsika. Mifonà enao @ Tompo t@ fihemoranao ary manomboka izao dia apetraho eo ampelatanany ny fiainanao sy ny fianakavianao, aza dia mifantoka be loatra @ ilay aretina fa jereo ny zavatsoa rehetra nomen'ny Tompo anao. Misaora Azy @ zavatra rehetra eny fa na dia ny fangirifirianao aza dia isaory Azy @ fonao manontolo. Isaory Izy fa nomeny asa ianao, firifiry ny olona tsy mahita asa ? Isaory Izy fa nomeny vady sy zanaka ianao, firifiry ny olona mitoetra irery, mitady vady, maniry zanaka ? jereo ny fitahiana rehetra zay arotsany aminao sy ny fianakavianao fa aza ny aretinao no jerena. Tsy misy zavatra zay ampandalovin'ny Tompo aminao ka tsy zakanao. Courage fa ny Tompo be fitiavana homba anao hatrany, ankino aminy ny fiainanao ary miverena @ le fitiavana voalohany dia i Jesoa izany.
Par: mila explication
Date: 08 janvier 2016 - 16:37
apetraho eo amin Andriamanitra ny fiainanao sy ny tokatranonao. normal raha mety ho kivy enao ary malahelo. ary io tsy zakan ny sainao irery. fa apetraho ho andriamanitra no miady ho anao. fa raha ianao no hoe itady solution tsy miaraka aminy dia sarotra be zan.
na eo ary ny aretina dia zao. andriamanitra tsy mamelanao irery. hoy izy hoe "« Satria malala eo imasoko ianao, eny, be voninahitra ianao sady tiako, » (Isaia 43:4).
avelao andriamanitra hiasa ho anao satria adidiny ianao.
raha tojo alahelo na fahakiviana enao dia zarao aminy fa izy anome hery ho anao. na eo ary ny olona samihafa de tsarovy fa ra eo apelatan-andriamanitra ianao dia tsy horarainy mandrakizay.
matsiaro enao fa mijaly, fa aza adino ny misaotra an Andriamanitra fa izy mahalala ny mahasoa anao. ary ny fihevitrany tsy fihevitrao
mahereza ao amin tompo
Date: 08 janvier 2016 - 17:01
Hoan'ny Fanina sy ny mpamosaka hevitra rehetra.
Raha mamaky ny zavatra nosoratanareo aho dia mety ho i fanina ireny no maharary fa saika isika rehetra ato mihintsy. Tsy mahafantatra ny fiasan'Atra akory kanefa dia mahasahy manome tsiny azy.
Tsy vitan'ny mamaiky toko sy andininy ao anty baiboly no hampahery azy, satria fantrat'isika tsara fa efa tonga amin'ny atao hoe farany takan'ny finoany sy ny fahalalany izy ka tsy afaka ny hieritreritra intsony fa eo akaikiny ihany no lakile famahana ny olany. Izao ataon-tsika izao no mahatonga ireny mpitarika fiangonanaa na mpitsabo sasany ireny mahazo laka eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy.
Mihevitra ve i fanina fa tsy maintsy io aretina io no ahafaty azy (sanatria) raha misy izany, fa tsy zavatra hafa ohatra? fa maninona ianao no mametra-panotaniana amin'ny finoanao ianao? izay ianao? gaga enao satria tsy takatry ny sainao ary tsy azonao ny fomba fiasan'Atra ao anatinao.
Raha namorona ny olombelona Atra sy ny manodidina azy dia niteny hoe " andeha isika hamorona olona tahaka antsika, sahala amin'ny endrintsika".
Firafitry ny vatan'Atra no nanovany ny olombelona ka tokony ho toy izany koa ny firesaka Aminy, na mitsabo izay ataonareo hoe aretina.
Mametra_panotaniana ianao hoe: Fa maninona no nasian'Atra an 'ilay aretina ny fiainao? Dia fanotaniana no ataoko valiny: Ireny Jamba avy any an-kibondreniny, tapa-tanana ireny ve? sns. Dia efa voasoaratra ho azy ireo? MIangatra ve izany le Nahary ka ny sasany ataony tsara, ny sasany ratsy ( raha izay no mahalaza azy). Tsia avy hatrany no valiny.
Namanao tsotra ( tsy mpitondra fivavahana, tsy ninin) aho ary tsy mangataka tambiny aminao na dia vary fitoventy aza fa raha misy ny azoko hanampiana anao dia vonona aho. Hampiakatra ny finoanao ka anasitrana anao.
Tsarovy ny tenin'ny jesoa kristy isiky ny avy manasitrana izy: Ny finoanao no ahavonjy anao. Ahoana anefa no ahatonga anao hanam-pinoana? Anjaranao izany.
Aza atao misy fiantraikany amin'ny fiainan-tokatranonao ny zavatra ratsy mahazo anao fa manjary mahazo laka ny devoly.
Date: 08 janvier 2016 - 17:33
fampaherezana ve no ataonao sa morale , sa fampianarana mivavaka sa inona ?
mila zavatra tsotra, mora raisina, tsy misy endrika fanamelohana ny olona tena mila fampaherezana, raha tsy izay dia manaraka ny teninao ihany ""mahatonga ireny mpitarika fiangonanaa na mpitsabo sasany ireny mahazo laka eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy""
Date: 08 janvier 2016 - 18:03
MAHITSSY> Tsy izany kah, azafady raha nahatezitra anao ny famoahan-kevitro. Ampianarina mivavaka? tsia. Ny tsotra sy mora raisina dia mitovy amin'izany koa ny zavatra azo aminy. Ka tsy ahasitrana ny aretiny. Ny manoro azy fa izy ihany no afaka ny anasaitrana ny aretiny. Fa tsy mila mitoky amin'iza n'iza izy afatsy izy sy ilay Nahary.
Ny mitanisa toko sy andiny sy ny fanomezana azy toko sy andiny dia tsy ahavotra azy akory. Mitaky asa-goavana amin'ny Atra matoa mampitondrainy zavatra sahaza azy izy.
Fa maninona ny fianarany vitany na dia maro aza ny olna nahazo azy? Fa ny an'Atra tsy vitany.
Aza tezitra ianao raha ataoko koa hoe, ianao koa marary fa tsy fatratrao, isika Malagasy rehetra mihintsy no marary fa tsy fatan-tsika.( Aza atao maha- tezitra) fa nohon'ny ataontsika ihany no mahatonga antsika hoatr'izao. Fa aza manome tsiny an'Atra (fadio). Ampiasao amin'ny tokony ho izy izay nomeny anao fa ho sitrana ianao, mandehana amin'ny lalana mahintsy, dia ho hitanao.
Tsy sanatria akory manamaivana ny aretiny aho fa tsarovy fa misy olona hafa any mibaby folo avy eny ny mahazo azy. ( Oh hoe JObA ) sy ny hafa mbola velona. Fa raha mahatoky an'Atra ianao. Misy tsy hainy va?
Tsy misy hery ambony indrindra mihoatra ny heriny fa tandremo, eny fa na dia ianao afaka manasitrana aoa aza.
Date: 08 janvier 2016 - 21:06
Taona 2012: narary mafy ahy ny tongotro, mila tsy ahavita hamindra aho. Nankany amin'ny dokotera dia sitrana.
Taona 2013: niverina efa in-telo ilay aretina, nankany @ dokotera dia voalaza hoe arthrose. Niova dokotera aho dia nitovy daholo ilay filazana ilay aretina. Afa-tsy dokotera iray izay ihany.
Taorian'izay aho dia voan'ny depression tanteraka. Kivy, nefa aho mbola tena tanora.
2014: Nanao radio sns (vola lany efa 200 000 ar). Nankan @ hopitaly iray izay dia kivy tanteraka t@ fandraisana tao dia lasa zahay nody. Tsy fantatra ilay aretina ankehitriny. Efa saika handeha tan @ gasy fa tsy resy lahatra.
Lasa aho nivavaka, novaiko daholo ny sakafoko, lasa nisotro rano. Najanoko daholo ny labiera, sakafo matavy, nanamboatra saina, sns. Nanao fikarohana maro aho t@ internet, sady nanohy nivavaka dia nahita zvtr bdb t@ internet izay raisiko hoe revelation avy @ Andriamanitra nentiko niatrehina ilay aretina.
Fehiny: Ndraindray ny dokotera milaza zavatra aminao (aretina), satria izay ny zavatra nianarany. tsy azo anomezana tsiny azy, fa izaho tsy nanaiky mihitsy. Ary efa betsaka ny zavatra niseho t@ fiainako fa io rehefa mbola mino ianao fa misy ny fahagagana dia tanteraka aminao ilay izy.
Sitrana aho ankehitriny ary tsy niverina intsony ilay aretina. Tsapaiko mihitsy hoe sitrana ve aho satria izaho mahavita mandeha tongotra 30 mn isan'andro, fa tena sitrana tanteraka. Mitaiza vatana aho satria fantatro ny nahatonga ilay aretina dia alaviriko daholo izay zavatra tsy mahasalama rehetra.
Izay inoanao no anasitrana anao.
Mankahery izay manana aretina rehetra.
Date: 09 janvier 2016 - 09:25
tsy misy tsiny mihitsy ka ,tsy tezitra aho akory , tsy mazava amiko fotsiny ny tianao lazaina.
Toy izao ny fijeriko ny valinteninao (ary tsy ny anao irery fa misy ny valinteny mitovitovy @ anao):
Raha misy ray amandreny ,atao hoe tena tia zanaka... marary ilay zanaka,mila vonjy , mila fampaherezana , fantatry ny ray amandreny tsara ny mahazo azy ...dia toa misy fepetra maro ... toa misy misy ezaka takiana @ ilay zanaka... izay vao mety hamonjy ilay ray amandreny....
Ny zava misy anefa dia izao , ny ankabeazan ny RAR dia mamonjy ny zanany , na adala sy tsy azo nahitsy ary tsy azo nanarina aza...
Tsy mampitovy ny RAR @ Andriamanitra aho akory sanatria, lehibe izany Andriamanitra izany.
Ary angamba mihoatra noho ny RAR ny fitiavan 'Andriamanitra, ka izay no mahatonga ahy tsy ahazo ny valintenareo, Ianareo izay toa mahafantatra ny fomba fiasany .
Jereo fa izao no lazainao "Fa maninona ny fianarany vitany na dia maro aza ny olna nahazo azy? Fa ny an'Atra tsy vitany.",
Tokony nianatra an'Andriamanitra ve izy izany ???
Ilay fahaizanareo ny tokony hatao IZAY dia mitarika anareo hanao " procès" ankolaka, tsy ho ekenaO izao io hoe procès ankolaka io, kanefa izay no fijeriko izany teninao izany...
Za aza natanao diagnostic fa marary koa, tsy haiko na marina aloha ilay diagnostic na tsia ,fa izaho tsy dia mila procès toy izany, tsy mitovy ny fijerin-tsika an Andriamanitra.
Forum moa ity, malalaka, samy milaza ny heviny, hajaiko ny fijery tsy mitovy.
Par: Mahagaga izy!
Date: 09 janvier 2016 - 11:47
Tena diso mihitsy le hoe efa nangataka amin'Andriamanitra de tokony valiny. Tena izay mihitsy n'y hevi diso matetika henoko. Nahoana moa no force n'a Izy hanao izay tianao atao nefa ianao olombelona aza Mbola misy safidy.
N'y antony hitenenako an'izany d'efa nandalo sedra tena mafy za ary mihevitra n'y tsy ho tafavoaka mihitsy. Saingy kosa tsy kivy fa natahotra'an'Andriamanitra foana. Teo ampahakivina za de nieritreritra fa aleo za tsy hanao projet intsony fa n'y projetko rehetra tsy misy vita daholo ary atao hoe dans l'eau! Fa alao Andriamanitra no hitondra n'y fiainako de mivavaka za MBA ho tantanany. Nandeha n'y fotoana ary niravina tsikelikely n'y olana. Efa taona maromaro taty aoriana nanao jery todika za ary nahita fa lalana hafa no nomeny ahy ary raha izay azoko tamin'ny projet mpiainako de kely alavitra amin'ny azoko izao.
Tsy hainao n'y projet anaovan'Andriamanitra anao, mangataha ho tantanany f'aza kivy. Mankahery, naveriko indray aza manao hoe nangataka de valina, manaova hoe aleo izy n'y mitantana fa ianao manaraka azy. Mazotoa!
Date: 10 janvier 2016 - 10:46
hoy ianao oe :"Tsy vitan'ny mamaky toko sy andininy ao anaty baiboly no hampahery azy",aza atao an'izany ny tenin'Andriamanitra fa hoy Jesosy tam nalain devoly fanahy tao anaty ady sarotra oe:"tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra rehetra izay aloaky ny vavan'Andriamanitra",aza maka fanahy olona tsy hatoky ny tenin'Andriamanitra.
ho an'ny mahagaga izy>>
hoy ianao hoe :Tena diso mihitsy le hoe efa nangataka amin'Andriamanitra de tokony valiny.Diso zany ny tenin'ny Jesosy aminao oe "mangataha dia omena ianareo ; ianareo na dia ratsy aza mahay manome zavatsoa ny zanakareo,maika va fa ny Rainareo any andanitra tsy hanome zavatsoa izay magataka aminy"(matio7:11)
,raha bois de rose sy 4x4 no angatahanao dia mety tsy ho valiany raha tsy mahasoa ny fanahinao ,hoy ny jakoba4:3 « Mangataka ianareo,nefa tsy mahazo, satria diso fangataka, mba holaninareo amin'ny filanareo. »
sitrana amin'ny aretina izany amiko zava-tsoa (tsy haiko raha misy sahy miteny ny mifanohitra amin'izany);tam teto antany Jesoa dia « nahasitrana olona maro tamin'ny rofy sy ny aretina sy ny fanahy ratsy sady nampahiratra ny jamba maro. » (Lioka 7:21),tadidio fa mbola miasa Jesoa atramzao segondra zao ary tsy miova mandrakizay.
Farany,ny aretina amiko dia mety zavatra entin'Andriamanitra hamolavolana sy hanovana anao,toy ny nanjo ahy,ity no teny nentin'Andriamanitra hampahery ahy :« Aza matahotra ianao, fa momba anao Aho; Ary aza miherikerika foana, fa Izaho no Andriamanitrao; Mampahery anao Aho sady mamonjy anao; Eny, mitantana anao amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinako Aho. » (Isaia 41:10)
averiko foana ny tenin'i JESOA:"mangataha dia omena ianareo" ; "mivavaha ka aza mitsahatra"
Date: 10 janvier 2016 - 11:47
N'y fehevitro tsy fihevitrareo! Izay le fijerin'Andriamanitra, raisin'ny olona n'y baiboly de adikany faran'izay ilainy eo amin'ny fiainany, diso no mi force an Andriamanitra hanao izay sitrakao satria izay no tianao. Raha ao aminao n'y finoana tsy hainao akory n'y zavatra tonga aminao. Diniho anie e! Izay no mahatonga n'y olona manaonao foana mihitsy,satria mihevitra fa rehefa nangataka izy de nahazo nefa n'y fiainany maha kristianina azy tena tsizarizary. Lazaiko aminao fa n'y fiainany kristianina dia tsy n'y fankanesanao any ampiangonana ihany, tsy n'y fivavahanao maraina s'y hariva s'y izany n'y mihetsika ihany, fa n'y fomba fiainanao mihitsy, tsy hoe mivavaka aho androany de mangalatra aho rahapitso. Firifiry n'y milaza mivavaka moa ny olona nefa manabaka n'y mpiarabelona azy? Firifiry no mametsifetsy, n'y loza dia miavonavon ohatran'ny inona. Raha Mbola izany n'y fiheverana ka tsy misy fanetrahan tena de aza mieritreritra famonjena izany. Kivy mihitsy n'y tena fa n'y milaza fa kristianina n'y milaza fa mandeha any am-piangonana isan'andro, mahalala n'y toko s'y andininy no mpandainga velona. Aza forcena Andriamanitra fa fantany n'y ataony, mahita izy fa tsy ianao no handidy Azy, misy lalana hafa ho anao rehefa tsy azonao izay ilainao. Ho an'ity olona marary ity no resako eto aza kivy ianao mangataha amin'Andriamanitra fa tsy fantatra akory n'y soa azonao Aminy, lehibe Izy fa zavatra maro no tianao ho fantatra. Jereo anie Joba e, fa inona no tsy nanjo azy e, fa tena nijaly nefa tsy niala izanyizy ary nampiseho fa tena mino. Fitiavana lehibe no nomen',Andrianitra azy avy eo, ohatra fotsiny iny fa betsaka n'y zavatra misy eto an tany. Fa mila fanetrahan tena be dia be n'y miaraka amin'Andriamanitra.mety ho kivy ianao de miaraka de ataovy ao aminao hoe misy lalana hafa tian'Andriamanitra ho ahy izany matoa aho Mbola tsy nomeny fanasitranana aho. N'y expérience n'y olona tsy mitovy fa mahereza!
Date: 10 janvier 2016 - 13:11
Date: 10 janvier 2016 - 13:16
Lazainy koa ny antony telo lehibe mahatonga izany.
1 Safidy: “Izay afafin’ny olona ihany no hojinjainy.” (Galatianina 6:7) Azo antoka fa hizaka an’izay fijaliana vokatry ny ataony ny olona iray mifidy ny hifoka sigara, na tsy mitandrina rehefa mitondra fiara, na mandanilany ny volany.
2 Fisehoan-javatra Tsy Ampoizina: “Mety ho azon-tsampona izy rehetra amin’ny fotoana tsy ampoizina.” (Mpitoriteny 9:11) Maro no iharan-doza satria fotsiny sendra teo amin’ny toerana nitrangan’ny loza na noho ny fahadisoan’ny hafa. Asehon’ny tatitra, ohatra, fa betsaka kokoa no mijaly rehefa tsy miraharaha fampitandremana ny olona, na tsy ataony mafy tsara ny tranony ka tsy mahatanty andro ratsy na horohoron-tany. Maro kokoa àry no mijaly noho ny fisehoan-javatra tsy ampoizina.
3 “Ilay Mpitondra An’izao Tontolo Izao”
Hoy ny Baiboly: ‘Eo ambany fahefan’ilay ratsy izao tontolo izao manontolo.’ (Jaona 12:31; 1 Jaona 5:19) I Satana Devoly “ilay ratsy.” Anjely mahery “mpitondra ny fahefan’ny rivotra” izy, ary mampiely “ny toe-tsaina izay miasa ankehitriny ao amin’ny zanaky ny tsy fankatoavana.” (Efesianina 2:2) Mampihoron-koditra loatra ny heloka bevava sasany, toy ny fandripahana foko sy ny fampijaliana ankizy, ka sarotra inoana hoe ny olombelona samirery no mahavita izany. Midika ve anefa izany hoe tsy miraharaha ny fijaliantsika Andriamanitra? Vitany ve ny hamarana ny fijaliana? Hanao izany ve izy?
Date: 10 janvier 2016 - 14:18
raha ho fintiniko ny tenin' i JW dia :
- na avy am tsika ihany no nahatonga ny loza na avy am satana
- Atra am io mijery tsara fotsiny fa tsy manofa n'inn n'inn
>> ary ahoana ny anjely no tsy miditra antsehatra sa tsy asany zany ??????
Date: 11 janvier 2016 - 09:24
roso> ny tenin'Atra dia natao ihainana fa tsy novakiana sy ho azo fotsiny. Tahaka ilay teniny tami'ny hamorona ny olona "handeha isika hamboatra olona....." Inona moa no dikan'izany? satria isika dia sobin'Atra toa an'i Jesoa kritsy fa saingy isika no tsy nahay nikojakoja an'izay sombin'Atra antsika izay ka lasa niharatsy.
matoa misy ny ratsy dia miakeva enao fa anisan'ny tompon'andriakitra koa mampisy ny ratsy.
Tsy avy amin'Atra ny ratsy. Moa misy ray amandreny hanome zavatra ratsy ny zanany ve?
Ry kristiana malala isany, fotoana izao hanasokafanantsika ny masontsika amin'izay, fa tsy ho boloky lahy homamboatseva fotsiny ihany. Tsy ho variana ami'ny karazan'antoko fivavahana, fa anaovana ny asan'ilay mpahary.
Misy malagasy tia ny namany tahaka ny tenany ve? resahahina io dia hay fa rehefa atao de tsy vita.
Date: 11 janvier 2016 - 11:28
Mampahery anao fa tsara Jesosy, Iza no olona tia anao indrindra eto ambonin'ny tany? ny zanakao ve sa mamanao sa... fa ny fitiavan'i Jesosy tsy azo ampitahaina amin'ireny akory fa tsara lavitra mila manantona azy dia milaza ny hafaliana sy ny alahelo dia faly Izy ary omeny anao izay irian'ny fonao
Date: 11 janvier 2016 - 11:59
fanina> efa saika tsy hanoratra aho nefa misy hery manosika ato anatiko hampahery anao, de ataoko izany.
Izaho izay miresaka aminao: de efa voan'ny cancer tam 2013, nandalo fitsaboana maro ary de mbola nahazo tombon'androm-pahavelomana mou atram'zao iresahako aminao izao, 2 ny zanako ary mbola kely izy ireo. Tamin'ny voalohany nahalalako fa voan'io aretina io aho de tena galère totale ho ahy, ary tena mafy tamiko, ny zanako mbola 3 taona tam'zany.
Nande ny andro sy ny taona, tsapako oe notefen'i Atra tsikelikely ny fomba fijeriko sy fieritreretako, izay tena isaorako lehibe Azy, nanomboka nanaiky sy nisaotra Azy tam zvtr rhtra aho, na soa na ratsy no noraisiko taminy de nianatra mafy mintsy mba hahay misaotra Azy, satria de misy tokoa ny fiheviny izay tsy takatry ny saina, nefa ataony mba hahasoa. Io anefa tsy voatery ny ara-nofo. Ny zvtr tsapako tamiko zao: de tiny aho hifandray bb koko taminy satria de lasa nitolona am-bvka isanandro, ary lasa nazoto namaky ny teniny. Etsy an-daniny kou, tiany aho atao ( moyen) hisarihana ny sain'ireto fianakaviako izay mbola renok'izao fiainana izao. Nahay nanaiky aho nanomboka teo fa ataony fitaovana ( moyen) mba hiverenan'ireo misalasala, tiny hatao temoin oe misy Izy, ary mahery Izy.
Farany, mangataha fiadanam-po amin'Atra na de mizaka olana maro aza, Faly be ny devoly mantsy rah vo mahare fa mitady ho resy isika, na be ahiahy. Toherina mintsy ny devoly rah vo mitady ho kivy na ho resy, Ny ahy ny nataoko de miteny mintsy aho hoe: an'Atra ny aiko, fofon'ainy aho ka tsy anjaranao mintsy ry devoly no mampitahotra ahy an-drafahafatesana fa Atra irery ihany no afk manapaka ny androko sy ny hakany ahy hody.
De mitrotro am-bvk anao sady mankahery anao amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako.Tsy mifankahalala isika, saingy azo taoa tsara kosa ny mifampitondra am-bavk." Soyez benis"!.
Par: Efa voavonjy
Date: 11 janvier 2016 - 12:03
Be izay voalaza izay.
Mivavaka ho anao aho !
Date: 11 janvier 2016 - 13:52
ptitemaman > tena midera ny fahamasisantsainao aho, mankahery hatrany miatrina ny aretina sady misaotra amin'ny fankaherezana
misaotra izay nandray anjara ihany koa fa dia betsaka ny azo raisina hoentina hisaintsaina ny fiainana sy hanatsarana azy hatrany
Date: 14 janvier 2016 - 15:25
Be zay voalaza zay, ary tena mahasoa. Nisy namana zay manentana toy izao: mahereza mivavaka, ary maninona moa na any an-danitra aza vao hahazo ny valim-bavaka?
Tena variana aho t@ zay. Andriamanitra no mahalala izay fotoana mety hamaliana, fa ny anjarantsika dia ny manaraka Azy. Rehefa resy lahatra isika fa mila Mpamonjy ka nandray ny famonjena, de ampy antsika izay fa mihevitra ny tsaratsara kokoa ho @ fiainana mandrakizay. Mazotoa e, aza kivy fa fandalovana ny eto. Fotoana fohy anomanana ny ho avy ny eto, fa rosoy ny dia.
Date: 14 janvier 2016 - 15:51
Tsy hitako zay ho lazaina anao fa hivavaka ho anao no azoko atao dia mirary soa ho anao
mino aho fa ahitanao anireo valimpanontaniana tsy takatriny saintsika olombelona reo dia mety @nao mamaky sy misaintsaina ny tantara ny JOBA miangavy aho ra sitrakao na tsy dia mazoto aza enao vakio io tantaraNY JOBA io fa lesona lehibe ho any fianantsika.
Par: mitovitovy cas
Date: 16 janvier 2016 - 10:41
Azoko sary an-tsaina ilay aretinao fa ny torohevitra omeko anao dia aleo vivre avec toy izay mandany andro mitsabo azy.
Io aretina io dia vokatrini zavatra nataoni ray amandreny tany aloha tany araka ny ao @ Eksodosy 20-5 hoe: "Izaho Jehovah Andriamanitrao, dia Andriamanitra saro-piaro ka mamaly ny heloky ny ray @ zanaka hatr@ zafiafy sy zafindohalika, dia amin'izay mankahala Ahy; nefa kosa mamindro fo amin'ny olona arivo mandimby izay tia Ahy ka mitandrina ny didiko"
Eo izany no fanantenana ho antsika fa mila mitandrina ny didin'Andriamanitra isika dia mahazo famindra-po fa aza kivy.
Ianao kosa ve dia tsy nahatsapa mihintsy fa nisy ny fitahian'Andriamanitra anao matoa enao mbola velona sy eo amin'izao toerana misy anao izao.
Toro hevitro anao dia aza dia atao ambony be loatra fotsiny ny objectif eo @ fiainana dia hanana paix a l'interieure enao dia hitanao fa misy anjara fifalianao eto antany na dia ny fifaliana any andanitra aza no tena zava-dehibe.
Par: fanamarihana kely
Date: 16 janvier 2016 - 11:46
Za tsy mahazo antsina ny aretina nahazo anao , fa ilay hoe mety hifindra @ zanakao no anaovako fanamarihana kely satria efa mandroso be izao ny fitsaboana:
- raha aretina manaranaka dia betsaka no fepetra azo azo raisona mialoha
- raha aretina mifindra, raha vao nahazo fitsaboana ianao , dia tsy tokony mifindra izany , raha sanatria viral dia resaka complément @ homeopharma dia mampihena na ahafahana mifehy azy , ary tsy fidiny anao fa aza dia be eritreritra lotra
Date: 16 janvier 2016 - 19:49
-Mafy ny mahazo anao. Mety ho kivy sy ketraka, saingy aza avela ny finoana fa io no hery ahafahanao miady @ olanao sy ny aretinao.
Vakio hatrany joba. Nahita ny mangidy i joba ary tena efa saika hamono tena, fa noho ny finoany dia tafaverina indray ny fahasoavana ka nampiakatra azy hiaradia amin' Andriamanitra indray!
Ny fisedrana dia tsy azo idovirana, samy mahazo ny anjarany avy isika olombelona satria samy mpanota avokoa. Hoy jeso hoe: tsy ny marary no mila mpitsabo fa ny marary, tsy tonga hanampy ny marina ho fa ny mpanota hibebaka!
Porofo izany fa tsy mamela antsika irery izy fa manampy direct. Ny valim-bavaka dia Andriamanitra irery ihany no mahalala izany.
Ny anjaratsika dia ny mivavaka, ny manaraka ny lalàny, ny manao ny sitra-pony. Raha manao ireo isika dia aoka arahina finoana fa mbola ho avy ny valim-bavaka satria Andriamanitry israely na jakoba dia mpahary ny lanitra sy ny tany ary mahery sy matanjaka ka tsy hanadino antsika velively.
Hoy izy hoe: fantatro ny vinavina natokako ho anao. Tsy vina ho an'ny fahoriana sanatria fa hoan'ny fiadanana sy filaminana mba hanananao ho avy feno fanantenana.
Mahereza, mivavaha ary aza mitsahatra, manaova ny sitrapon'n Andriamanitra fa na ho ela na ho aingana Jeso sy Jehovah tsy hanary anao, tsy hanary antsika olony velively! Amen!
Date: 18 janvier 2016 - 09:53
manompoa an'i Jehovah....dia hesoriny @nao ny aretina!
Date: 18 janvier 2016 - 15:31
Na ianao aza dia efa mahafantatra ny valin'ny zavatra tadiavinao, saingy odinao tsy hita, tsy te hino ianao.
Ezaho ihany, rehefa nahasoratra teto ianao dia efa zava-dehibe izay, saingy olona tsy atoro ninoninona ianao fa MAHALALA TSARA sady MISAINA, , ka ianao ihany dia mahavaly ny zavatra tianao atao.
Date: 22 janvier 2016 - 13:49
tena marina zany mimisoa
entina ambavaka ny namana fanina !
Date: 06 septembre 2016 - 14:21
Marina tokoa fa mila manompo an'Andriamanitra @ fo, dia esoriny aminao ny aretina nefa aza adino koa, manantona mpanompon'Andriamanitra izay heverinao fa manana hosotra ( tsy mijery anaram-piangonana, fa azonao angatahina Andriamanitra mba hitondra anao @ izay sitrany) mba hanao délivrance anao sy hanapaka ny ozona tsy hiampita any @ taranakao (satria fantaro fa rehefa ny aretina no tsy sitram-panafody intsony dia ny devoly izay no ao ambadikany)
Aza manaiky hitoeran'io zany fa toero ny devoly dia handositra anao izy. Ary ao antin'izany sady manao auto-delivrance ihany koa rehefa any an-trano fa tsy miandry pasitera fotsiny.
Tsy sitrak'Andriamanitra izany ny hampijaly anao ao anaty aretina fa ianao no mila manao dingana: mazoto mamonjy fotoam-bavaka, mihaino toriteny,mamaky sy mandinika baiboly, ... dia manaraka ihany koa izay torohevitry ny pasitera raha inoanao fa tena mpanompon'Andriamanitra marina izy ireny, fa amin'ny alalan'ireny no hanoroan'Andriamanitra izay sitrapony tokony ataonao, hamonjena ny fanahinao sy hanasitrany ny aretinao.
Tandremo anefa rehefa afaka sao manadino an'Andriamanitra ka ho hitan'ny devoly fa madio ny trano dia hitondra fanahy fito hafa ratsy noho ny teo aloha izy.
fehiny, manoloratena tsara hanompo an'Andriamanitra mandra-piala eto an-tany na hanao ahoana ho tohiny na hanao ahoana, fa ho hitanao fa izay fanampahan-kevitrao izay no handrasan'Andriamanitra.
Hitako eny @ afisy eny izao misy hetsika goavana hataon'Andriamanitra eny @ Coliséum eny @ Sabotsy 10 septembre, misy hoe io aretinao tsy ahafaty anao izany, koa maninona raha mba mankany?
Date: 06 septembre 2016 - 16:44
Trotra ny teniko aminao ranabavy.
Andriamanitra no tompon'ny aina, koa maninona ianao no miasa saina ny ampitso nefa ny anio aza tsy fatatrao izay avoakany?
Misy tsy maharary toa anao fa rehefa tonga ny androny dia maty izy.
Raha tsy tianao iaina tahaka anao ny zanakao dia " garder ho anao ny secret". Ary aza manahy fa ny rehetra dia manana an'io tsiambara-telo io daholo.
IFalio izay tombon'andro omen'Atra anao, ary aza kivikivy fa mafy ny fitsapana hoan'ny olona izay hitan'Atra fa mpanaradia azy. Fa ho hitanao ny vokany. Ny miaraka amin'Atra dia mahatanty ny fitsapana rehetra. Ka miasa eo aminao izy matoa ianao no nofidiny ka aoka ho mendrika izany ianao.
Nomeny fahefana ianao hanamboatra ny hoavinao ka anao ny sisa.
Date: 07 septembre 2016 - 12:13
Ny fahitako anao dia tsotra... efa tsy maharesy lahara anao intsony ny fivavahana kristianina kanefa toa manenjia anao ny eritreritrao amin'ny fihozongozonan'ny finoanao...
Ny toro hevitro dia tsotra araho izay maha resy lahatra anao ary hajao ny maharesy lahatra ny hafa...
Izaho koa mantsy Kristianina fa zaho dia manana ny fomba fijeriko manokana fa tsy izay tenenin'ny pasitera sy môpera akory dia ekeko, eny fa na ny Baiboly aza dia misy tsy maharesy lahatra ahy... La religion est personnelle. Raha hitanao fa ny fivavahana no manome hery sy maharesy lahatra anao dia ataovy fa raha tsy itanao ny vokany dia aza mampijaly tena...
Ny fitaizana ny ankizy dia taizao amin'ny fomba kristianina izy raha tsy hitanao izay maha ratsy izany na dia atao aza hoe tsy resy lahatra tanteraka aza ianao ... tazony hoa anao iny fa ny zanakao koa dia omeo fahalalahana amin'ny finoana... zany hoe n'impose pas mais propose... dia anjazany no misafidy any aoriana...
Ny vadinao indray dia hajao ny safidiny ka raha sanatria ianao lasa tsy mpino. Ary izy koa tokony hanaja ny safidinao...
Raha ny hevitro manokana dia aza mijery hoe rehefa mpino dia olona tsara fa rehefa tsy mpino dia olona ratsy... foutaises izany... aza mise culpabiliser zany amin'ny heritreritrao... Ny mpino aloha hatreto no manapôka bomba ... Vakio ny evanjely... tadidinao ny Samaritana tsara fanahy?? ny mason'Andriamanitra tsy nijery hoe Jiosy sa Samaritana (finoana no anisan'ny mahasamihafa ireo ary ny Jiosy dia manana mépris na manambany ny finoan'ny Samaritana) ... ka eto ilay samaritana izay noheverin'ny Jiosy fa manana finoana sadasada no tena manao ny sitrak'Andriamanitra fa ilay Jiosy fatra mpanaja lalàna dia zéro manatody... Zaho manokana dia mino fa misy Andriamanitra fa tsy araky ny fampianaran'ny fiangonana azy (dogme traditionel) ... ka raha mino ianao dia izay maharesy lahatra anao hinoana... ra sanatria tsy hino intsony dia amboary arak'izay ny fiainanao...
Maro ny sedra amin'ny fiainana fa mahereza